May 23, 2019 - MM Live News
စုထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ အမှိုက်ကောက်တဲ့သူက ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဆိုင်အတွင်းသို့ ဝင်လာသောအခါ….
May 23, 2019 MM Live
အမှိုက်ကောက်တဲ့သူ ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဆိုင်အတွင်း ဝင်လာသောအခါ ဖြစ်သွားပြန်ပြီ ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး လူကိုကြည့်ပြီး အထင်သေးတဲ့ လူတစ်ချို့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေ မကြာမကြာ ကြားသိနေရပါတယ်။ မည်သည့်နေရာမဆို မိမိအလုပ်ကို မိမိတာဝန်ကျေအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါ။ ဆိုင်ထဲဝင်လာရင် သူတောင်းစားဖြစ်နေရင်တောင် ဘာကိစ္စလဲ အရင်မေးရမှာ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာဝန်နဲ့ အလုပ်ပဲလေ..။ လုံခြုံရေးကလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ့် တာဝန်ကို ကျေပွန်ဖို့ပဲလိုတာပါ..။ မသင်္ကာရင် မေးကြည့်ပါ မေးကြည့်လို့ တောင်ပြောမြောက်ပြောပြောနေရင် ဝုန်းလိုက်တော့ပေါ့..။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဖုန်းဆိုင်ရှေ့ မှာ ကြည့်နေတဲ့ အမျိုးသားကို လုံခြုံရေးအစောင့်တွေက အကြိမ်ကြိမ်ကုန်တိုက်ထဲကနေ အပြင်ဆွဲ ထုတ်ခံရပါတယ်…. သူဟာ အမှိုက်ကောက်ပြီးစုထားတဲ့ ငွေနဲ့ ဖုန်းဝယ်မလို့ ပါ.။. ဆိုင်က အရောင်းဝန်ထမ်း ကလည်း သူမေးတာမဖြေခဲ့ပါဘူး ။တကယ်ဆို လုယက်မယ့်သူမှမဟုတ်တာ […]
သိန်း၁သောင်းတန်မြေကွက် ၆ ကွက်ကို ရောင်းပြီး သီလရှင်အပြီးဝတ်တော့မည့် ဒေါ်တင်တင်စိန်
သိန်း၁သောင်းတန်မြေကွက် ၆ ကွက်ကို ရောင်းပြီးအလှူလုပ် သီလရှင်အပြီးဝတ်တော့မည့် ကမ္ဘာပတ်ဒေါ်တင်တင်စိန် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံကို ခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် မော်တော် ဆိုင်ကယ်အဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာပတ်ခဲ့သူ ဒေါ်တင်တင်စိန်သည် သိန်းပေါင်း ၆ သောင်းတန်ဖိုးရှိသည့် သူပိုင်ဆိုင်သော မြပုဂံဟိုတယ်နှင့် မြေကွက် ၆ ကွက်ကိုရောင်းချပြီးပါက လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်၍ သီလရှင်ဝတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြပုဂံဟိုတယ်သည် ပုဂံမြို့လောကနန္ဒာဘုရားအနီးတွင်တည် ရှိပြီး ဘန်ဂလို ၁၁ လုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဟိုတယ် ဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းအားလုံးသည် ၂ ဧကခန့်ရှိပြီး ပေ ၆ဝ ထ ၈ဝ ခြောက်ကွက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကာလ ပေါက်ဈေးအရ ယင်းမြေကွက်များသည် တကွက်လျှင် သိန်းတသောင်းခန့်ရှိသည်။ ”အမှန်က မြေကွက်ကြီးပဲဆိုရင် ၆ ကွက်ပါတယ်။ […]
အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အောင်မြင်စွာနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်က တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး တစ်ဦးပါ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမနဲ့ တစ်ထေရာတည်းတူတဲ့ ကလေးမလေးပုံကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှထားပါတယ်။ ချစ်စရာလေးနော်……ကလေးမလေးက သင်ဇာနဲ့ တော်တော်ကို တူတာပဲနော်။ အဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းမှ Snapchat Filter နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလည်း သူမရဲ့ ကလေးပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီး “ဒီတစ်ခါပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ဖူးသေးတယ်” ဆိုပြီးလည်း ရေးထားပါသေးတယ်။သင်ဇာ့ကို အခုလို ကလေးပုံစံလေးနဲ့ တွေ့ရတာ တော်တော်လေး ချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း […]
May 23, 2019 MM Live News
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ပင်စင်ယူပြီးပါက နေစရာအိမ်ပါ ရရှိတော့မည် အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရုံးဌာနအသီးသီးမှ ပင်စင်ယူပြီးပါက နေစရာနေရာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရရှိမည့် အစီစဉ်တစ်ရပ်ကို စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌါနမှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌါနနှင့် ပူပေါင်းကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ စစ်ဘက် ရဲဘက် အမှုထမ်းအရာထမ်းများအားလုံးအတွက် ပင်စင်ယူသွားပြီးနောက် နေစရာနေရာအတွက် ပူပင်ကြောင့်ကြမှု မရှိစေရပဲ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲကို မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် မြေနေရာ၊ လျှပ်စစ်၊ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး အခက်အခဲများစွာ ရှိနေသည်မှန်သော်ငြားလည်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။အဆိုပါအစီအစဉ်ကို စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌါနနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌါနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် Credit MyanmarExpress Unicode […]
မိမိယာဉ်နှင့်တိုက်မိသည့်တိုင် အလျှော်ပေးစရာမလို ၊ အတိုက်ခံရသူသေဆုံးသည့်တိုင် ထောင်မကျ
မိမိယာဉ်နှင့်တိုက်မိသည့်တိုင် အလျှော်ပေးစရာမလို ၊ အတိုက်ခံရသူသေဆုံးသည့်တိုင် ထောင်မကျ ဟုတ်ပီအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရှင်းရအောင်ဘယ်နှယ့်ကို့ကား/ဆိုင်ကယ်နဲ့ တခြားကား/ဆိုင်ကယ်ကိုတိုက်မိတာအလျှော်ပေးစရာလဲမလိုဘူး ဒါတင်မဟုတ် တဘက်လူသေဆုံးသွားတာထောင် ထောင်မကျဘူးရယ်လို့ဟုတ်ပါ့မလားမောင်နေမျိုးသူရရယ်ပေါ့ကောင်းပီ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရဖို့ ဥပမာလေးတွေနဲ့ ပြရအောင် အကိုက လမ်းမကြီးအတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ယာဉ်ကြေကနေကားမောင်းလာတယ် ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ လမ်းသွယ်ထဲကနေ ကား ဒါမှမဟုတ် ဆိုက်ကယ်တစ်စီးလမ်းမကြီးပေါ်မောင်းတတ်လာတယ်တိုက်ပီ အဲ့ကား/ ဆိုင်ကယ်ကို အကို့ကားနဲ့အကိုတိုက်လိုက်တာ လမ်းသွယ်ကမောင်းတတ်လာတဲ့ကာစုတ်ပျက်သတ်သွားတယ်ဗျာ အဲ့ယာဉ်မောင်းသူဘာလုပ်မလဲ အလျှော်တောင်းလာမလားတိုင်မလား ကြိုက်တာလုပ် အကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး လျှော်စရာလဲမလိုဘူး ဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပါတယ် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းသူကမှားတာလေ သူခံပေါ့ နောက်ဆုံး အဲ့ယာဉ်မောင်းသူ သေသွားတယ်ထားဗျာလူသေလို့အမှုဖွင့်လိုက်ပီ အကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး အဲ့သေတဲ့သူတရားခံလေသေလဲသေဆုံးသေး ဒီမှာ တရားခံဆိုပီးနာမည်ကကျန်နေခဲ့ရသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲ စောစောကပြောသလို သူက ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း မှားခဲ့တာကို မှားတဲ့သူတရားခံလေဟုတ်ပီ နောက်တစ်မျိုးပြောကြရအောင်.အကိုအိမ်ကနေကား/ ဆိုင်ကယ်စီးပီးထွက်လာတယ်လက်ရှိအကိုမောင်းနေတဲ့လမ်းက ပေ ၁၀၀ ကျယ်တယ်ဆိုကြပါစို့ အဲ့လမ်းကို အကိုစိတ်ထဲကနေ […]
အကြမ်းဖက်သမားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက် ရှိနေ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦးရောက်ရှိနေသည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်သူသည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လုံခြုံရေးအား ယမန်နေ့နေ့လည်ပိုင်းက စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်သည့် ISIS အကြမ်းဖက် သမားဟုယူဆရသူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက် ရှိနေကြောင်း သတင်းများ လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံနှံနေသည်။ ယင်းအကြမ်းဖက်သမားသည် နေထိုင်ခွင့် ၁ နှစ်၊ ၂ လ ကျော်လွန်နေထိုင်နေပြီး ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများတွင် လာရောက် တည်းခိုပါက အကြောင်းကြားရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်စောင်လည်း ထွက်ရှိထားသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက လေဆိပ်လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှု မရှိစေရေး၊ ခရီးသည်များ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ သွားလာနိုင်ရေး၊ လေဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် လေဆိပ် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတို့မှ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် […]
ငွေတွေ အများကြီးအကုန်ခံပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များတွက် သတင်းကောင်း
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး share ပေး ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ။ (ကွမ်းစားတဲ့သူ ကားသမားအချင်းချင်းမို့ လက်တို့လိုက်တာပါ။) ကွမ်းစားသူများ ခဏခဏ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ ကျောက်ကပ်လဲရမည့်သူများ ကတက်ခေါက်ကို သတိရပါလေ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး share ပေး ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ။ ကျနော်ရဲ့ ဖခင်ဟာ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ကျောက်ကပ်တု သွေးသန့် စင်ခန်း မှာ သုံးရက်လျင် တစ်ကြိမ် ၅၀၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျ နေပါ တယ် ။ လေး ရက်မြောက် ဆေးမဲ့ နေ့ညမှာ လုံးဝ အိပ်စက်ဖို့အဆင်မပြေ […]
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဆို တဲ့ ဒီကလေးတွေကို ဒီလိုမြင်ရတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူးဗျာ…
ဝေးဝေး လံလံ မဟုတ်ဘူးမြန်မာပလာဇာ မှာ။ ကော်လား ဘာလားတော့ မသိဘူး သေချာတာတော့ဒီကလေးတေ မူးယစ် စေတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ဘူးထဲ ထည့်ပြီး ရှူ နေကြတာ သေချာတယ်။ အစက အအေးသောက်နေတာလား ကြည့်နေတာ၊သေချာအောင် အနားကပ်ကြည့်တော့ ငါတို့ ၅၀၀ ဖ်ိုးလောက် ထပ်ဝယ်ပြီး ထပ်လုပ်ကြမယ် ဆိုတာ ကြားလိုက်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဆို တဲ့ ဒီကလေးတွေကို ဒီလိုမြင်ရတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူးဗျာ။ ပစ်မထားကြပါနဲ့။ မိဘတွေကို ဝိုင်းဆဲတာထက် ဒိပို့စ်ကို တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိူလ် အဖွဲ့အစည်း တွေ ဆီရောက် အောင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ အစ်ိုးရဘက်က တာဝန်ရှိသူများ အနေ နဲ့လည်း ဖမ်းဆီး တာမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြန်လည် ပြုစုပျိုးထောင် ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ […]
အသိ-သတိ ရှိပါ -ညီမငယ်(သို့) မနမ်းထိုက်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်
အသိ-သတိ ရှိပါ -ညီမငယ်(သို့) မနမ်းထိုက်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့် ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ချစ်သူ ပုံနဲ့နှစ်ယောက် တွဲတင်ခြင်းက ဓါးသွားထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ~ညီမငယ်~ တစ်ကယ်လို့သာ ကံကြမ္မာက လှည့်စားသွားခဲ့ရင်ပထမဦးဆုးံ ထိရှခံစားရမှာက ဘယ်သူလို့ထင်လဲကိုယ့်နှလုးံသား မဟုတ်သလို မာနနဲ့ သိက္ခာတွေပါ -ညီမငယ်~ နှလုးံသားတွေ နာမကျန်းဖြစ်စေတာက တိတ်တဆိတ်လေးငိုကြွေးလို့ရတယ် ဂုဏ်သိက္ခာတွေ နာမကျန်းဖြစ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တံတွေးခွက်မှာ ပက်လက်မျောနေရမှာ ညီမငယ်မိသားစုပါ ~ ချစ်တာကို လက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် နားလည်မူ့ဆိုတဲ့အလွှာလေးတစ်ခုခြားရုံနဲ့ လမ်းခွဲသွားကြရသူတွေ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတင် တစ်ပုံကြီးပါ -ညီမငယ်~ အထူးသဖြစ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ညီမငယ်များကိုပိုပြီး သတိပေးချင်ပါတယ် ချစ်တတ်စမှာ ရှေ့နောက်မမြင်ပဲအပျော်ရွင်ပြီး နှစ်ယောက်တွဲပုံတွေ လက်မထပ်ရသေးခင်တင်နေလေ့ရှိကြတယ် ချစ်သူနှစ်ယောက် (သဟဇာတ)မကျလို့-အဆင်မပြေတဲ့အခါ မဆုံခဲ့ကျရင်ဖြစ်စေ ပထမဦးဆုးံနင့်နာရမှာက ညီမငယ် တို့ […]